AQALKA SARE OO KU RAACAY XUKUMADDA INEY WADA-SHAQEYNTOODU XAL U KEENI DOONTO CABASHOOYINKA DOWLAD GOBOLEEDYADA – Kalfadhi
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in todobaadka soo socda uu guda geli doono xal u helista qilaafka ka dhaxeeya Dowladda Federalka ah iyo Dowlad Goboleedyada. Arrintan ayaa timid markii warqad lagu taariikheeyey 22-ka October, 2018 uu Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ku magaacaby guddi kala shaqeeya Aqalka Sare in la xaliyo qilaafka kala dhaxeeya Dowlad Goboleedyada.
“Xukumadda Federalka iyo Madaxweynahaba waxaan mahad uga celineynaa jawaabtii aan ka rabnay oo ay nasoo siiyeen, taasoo nasiineysa fursad aan ku hawlgalno” ayuu yiri Gudoomiye Cabdi Xaashi. Golaha Aqalka Sare ayaa 20-kii bishan u qabtay Xukumadda waqtigigoodii ugu dambeeyey oo ku ekeed 22-kii bisha, si ay uga soo jawaabayaan in ay diyaar u yihiin in la xaliyo wada-shaqeyn la’aanta ka dhaxeysa Xukumadda iyo Dowlad Goboleedyada, taasoo laba jeer oo hore fashilantay, sida uu ku doodayey Aqalka Sare.
Gudiga ay Xukumaddu u magacawday iney wax ka raadiyaan xalka qilaafka kala dhaxeeya Dowlad Goboleedyada waxa uu ka kooban yahay afar wasiir, oo kala ah Wasiirka Arrimaha Gudaha, Cabdi Maxamed Sabriye oo ah Gudoomiyaha Gudiga, Wasiirka Arrimaha Dastuurka, Cabdi Xoosh, Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo Wasiirka Amniga Gudaha, Maxamed Abuukar Islaw, oo dhamaantood ah xubno.
Golaha Aqalka Sare waxa uu sheegay iney tahay waajib uu leeyahay inuu hogaamiyo in la dhameeyo qilaafkan keeney iney wada shaqeyn waayaan Dowladda Federalka ah iyo Dowlad Goboleedyada. “Waxaan rabnaa in aan si toos ah isbuuca soo socda u bilowno hawshaas” ayuu yiri Gudoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Waxa uu sheegay in warqadda soo gaartay ee uga timid Xukumadda ay ku gacan siineyso in ay helaan xalka ay raadinayaan.
Warqadda Xukumaddu soo saartay ee lagu magacabay Gudiga matali doona iyada waxa uu Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ku sheegay inuu rajo weyn ka qabo xal u helista cabashooyinka ay Dowlad Goboleedyada qaarkood, sida lagu qoray warqadda, soo gaarsiiyeen Golaha Aqalka Sare. “Mudane Gudoomiye, waxaan kaaga mahadcelinayaa wada-shaqeynta waafiga ah ee ka dhaxeysa Xukumadda Federalka iyo Aqalka Sare” ayuu lagu yiri qeybta dambe warqaddaas.